Odayaasha Hiiraan oo hal arrin isku raacay iyo Xasan Sheikh oo... - Caasimada Online
Home Warar Odayaasha Hiiraan oo hal arrin isku raacay iyo Xasan Sheikh oo…
Odayaasha Hiiraan oo hal arrin isku raacay iyo Xasan Sheikh oo…
Beledweyne (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in Odayaasha Hiiraan is jiid jiid dheer kadib ay isla qaaten hal mowqif oo mideeya.
Wararku waxa ay sheegayaan in Odayaasha ay wada qaaten kulamo dhowr ay oo xiliyo kala duwan ay ku kala kaceen balse markii danbe ay ku gaaren go’aan ah inaanu ka qeybgalin shirka ka socda magaalada Jowhar ee xarunta Gobolka Sh/Dhexe.
Ugaas Cali Ugaas Muxumud Ugaas Shafeec oo kamid ah Odayaasha oo wareysi siinaayay Idaacada SMN ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in shirarkii u socday ay ka gaaren mowqif ah in aysan ka qeybgalin shirka ka socda magaalada Jowhar.
Ugaaska waxa uu sheegay in ujeedka ay mowqifkaasi u gaaren uu yahay mid salka ku haya la tashi la’aanta iyo baalmarka wadadii lagu dhisi lahaa maamulka cusub, sidaa aawgeedna waxa uu tilmaamay inay qaaten go’aan ah inaan dhag jalaqa usiin dhex dhexaadinta ay wadaan dowlada Somalia iyo IGAD.
Waxa uu sidoo kale, sheegay in wada hadalka socda uu mirro dhali doono keliya marka ay dowlada Somalia qaadato go’aanka odayasha ee ah in laba Gobol loo qeybiyo Hiiraan islamarkaana Maamul mideysan uu yeesho Gobolka Hiiraan oo kaliya.
Sidoo kale, waxa uu carab dhabay in aysan aqoonsaneyn Shirka ka socda Magaalada Jowhar oo la doonayo in Maamul loogu dhiso Gobolada Hiiraan iyo Sh/Dhexe.
Dhanka kale, waxa uu cadeeyay in mowqifka Odayaasha Hiiraan uu yahay mid qura oo aan laheyn ka laabasho.